Luka 13:31-35, Luka 14:1-14 NA-TWI | Biblica
Luka 13:31-35, Luka 14:1-14 NA-TWI
Saa bere no ara mu Farisifo bi baa Yesu nkyɛn bɛka kyerɛɛ no se, “Fi ha kɔ, efisɛ, Herode rehwehwɛ wo akum wo.”
Yesu ka kyerɛɛ wɔn se, “Monkɔka nkyerɛ sakraman no se, metu ahohommɔne, na masa nyarewa ɛnnɛ ne ɔkyena na ne nnansa so no, medu Yerusalem. Nanso ɛsɛ sɛ menantew ɛnnɛ ne ɔkyena ne n’adekyee na etwa ara na etwa sɛ odiyifo bewu wɔ Yerusalem!
“Yerusalem, Yerusalem, wo a wukum adiyifo na wusiw wɔn a wɔsomaa wɔn wo nkyɛn no abo! Mpɛn ahe ni a mepɛe sɛ meboaboa wo mma ano sɛ akokɔbeatan boaboa ne mma ano ne ntaban ase, nanso moampene so. Na mo afi bɛdan afituw na morenhu me kosi sɛ mobɛka se, “Nhyira ne nea ɔnam Awurade din mu reba no!”
Read More of Luka 13
Homeda bi, Farisini panyin bi too nsa frɛɛ Yesu adidi. Adidi no ase hɔ no, na wɔn a wɔahyia no nyinaa rehwɛ nea Yesu bɛyɛ. Na ɔbarima bi wɔ hɔ a ɔyare ahonhon.
Yesu bisaa Farisifo no ne mmaranimfo a na wɔwɔ hɔ no se, “Mmara ma ho kwan sɛ wɔsa yare homeda anaa?”
Wɔammua no. Enti Yesu soo ɔyarefo no mu saa no yare, gyaa no kwan.
Yesu bisaa wɔn a wɔahyia hɔ no nyinaa se, “Mo mu hena na sɛ n’afurum tɔ abura mu homeda a ɔrennyi no da no ara?”
Nanso wɔatumi ammua no. Afei Yesu hui sɛ, nnipa a wɔfrɛɛ wɔn adidi no ase no mu biara pɛe sɛ ɔtena mpanyin tenabea no, obuu wɔn bɛ bi se, “Sɛ obi to nsa frɛ wo apontow ase a, mpere wo ho nkɔtena mpanyin tenabea, efisɛ, ebia na wato nsa afrɛ onipa titiriw bi a ɔsen wo. Sɛ ɛba saa a, nea ɔtoo nsa frɛɛ wo no betu wo afi agua a wote so no so de ama nea ɔsen wo no na wode aniwu akɔtena akyiri baabi.
”Enti sɛ obi hyia wo apontow ase a, kɔtena akyiri baabi na sɛ nea ohyiaa wo no behu wo a, waka akyerɛ wo se, ‘Onua, sɔre na kɔtena mpanyin tenabea.’ Ɛno bɛma woanya anuonyam wɔ nnipa a wɔahyia hɔ no nyinaa anim. Na obiara a ɔma ne ho so no, wɔbɛbrɛ no ase, na nea ɔbrɛ ne ho ase no, wɔbɛma no so.”
Afei Yesu ka kyerɛɛ Farisini a ɔtoo nsa frɛɛ no no se, “Sɛ wotow pon a mfrɛ wo nnamfo, wo nuanom, w’abusuafo ne asikafo a wo ne wɔn bɔ fipam nko ara; sɛ woyɛ saa a, wɔn nso bɛto nsa afrɛ wo bi na ɛba saa a, na wonyɛɛ hwee. Na sɛ wotow pon a, hyia ahiafo, mmubuafo, mpakye ne anifuraefo. Esiane sɛ wontumi nyɛ saa bi mma wo no nti, ɛda a atreneefo bɛsɔre afi awufo mu no, Onyankopɔn behyira wo.”
Read More of Luka 14